Yedu garandi - Jesson Mureza Arts & Crafts Co., Ltd.
Zvese zvigadzirwa zvinotengeswa neChina-Mureza-Vagadziri zvinofanirwa kuve zvemhando yepamusoro uye zvinotumirwa munguva ipfupi inogoneka. Kana chero chakaipa chikaitika, isu tichabata nacho kamwechete uye kudzikisa kurasikirwa sezvazvinogona.
China-Mureza-Makenzi 'garandi zvirevo zvinosanganisira, asi hazvirevi kune:
Kutadza kutevera mirairo yegungano, zvinyorwa kana zvimisikidzo zvakabatanidzwa
Kukwegura kwakajairika kwezvinhu, kusanganisira Hardware uye zvinyorwa
Kushandisa zvisizvo uye kusatenderwa shanduko yezvigadzirwa
Zvinokuvadza kubva kune njodzi dzinongoitika dzoga, semadutu, mhepo ine simba uye dutu rine simba
Hwemhando nyaya dzekuprinta kana Hardware haina kutengeswa kana kuburitswa neChina-Mureza-Vagadziri
China-Mureza-Vagadziri vanochengetera kodzero yekuita mutongo wekupedzisira pane chero gakava gakava, rinosanganisira kugadziriswa kwekupedzisira kwechikonzero uye mutoro wekukuvadzwa pamwe nekugadziriswa kwekupedzisira kwewarandi mhinduro uye mhinduro.
Yakatemerwa Hupenyu Hwose garandi
Hupenyu hwechigadzirwa chinoenderana nekushandisa chaiko, zvese zvigadzirwa zvekudhinda zvakagadzirwa neChina-Mireza-Vagadziri vane nguva yewarandi.
Iyo garandi nguva yezvose Hardware, zvishongedzo uye mifananidzo ndeyegore rimwe. Kana chigadzirwa chakakuvadzwa nevanhu vasiri vanhu mukati megore rimwe, zvigadzirwa zvinogona kutsiviwa. Ndokumbira utarise kana iyo Hardware, zvishongedzo uye magiraidhi ari mune yakanaka mamiriro kutanga mushure mekugamuchira chigadzirwa. Kana matambudziko emhando yepamusoro akamuka mukati memazuva mashanu mushure mekunge mawana chigadzirwa, tinotsiva chigadzirwa mahara uye tobvisa mari yekutumira. Kana matambudziko emhando yepamusoro akamuka mazuva mashanu mushure mekunge mawana chigadzirwa, tinotsiva chigadzirwa mahara, asi hatizoitise mari yekutumira.
Kana nyaya yemhando yepamusoro ikaitika kana uchigamuchira zvigadzirwa, tanga watarisa kana bhokisi rekunze rakakuvara kana kwete. Kana paine chero kukuvara kubhokisi rekunze, ndokumbira utore mifananidzo yebhokisi rakakanganisika uye zvigadzirwa nenguva. Kana bhokisi rekunze risina kukuvara, ndapota tora mifananidzo yezvigadzirwa zvakakanganisika. Ndokumbira utumire gakava nerondedzero yenyaya uye mapikicha ezvese zvigadzirwa zvakakanganisika paunogamuchira zvigadzirwa uye uwane zvinokuvadza. Mushure mekugamuchira mapikicha ane chekuita nematambudziko emhando yepamusoro, isu tichaita muripo wezvakakanganisika zvigadzirwa mushure mekusimbiswa.
Isu hatigamuchire kudzoka uye kuchinjana kana ruvara rwemifananidzo rwadzima nekuda kwekushandisa kwenguva refu.
Ndokumbirawo musashandise matende mune yakanyanyisa mamiriro ekunze, senge inonaya mvura uye mhepo, zvikasadaro, vangangokanganisika.
Isu tinoziva mhando iri pamusoro pebhizimusi rakajeka, saka tinozvitora zvakanyanya. Isu tinovimbisa kana chero dambudziko rikaitika, HATIMWE takapfuudza iyo mari.
Isu tinobatanidza kukosha kukuru kune-yekutengesa-sevhisi sevhisi, saka ndokumbirawo ubate vatengi vedu vevashandi nguva yekutanga, isu tichawana mhinduro yakanakisa iyo inoderedza kurasikirwa munguva ipfupi.